नेपाली गायक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलमा : हेर्नुहोस भिडियो सहित – Khabar Silo
नेपाली गायक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलमा : हेर्नुहोस भिडियो सहित
काठमाडौं । नेपाली गायक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको १८ औं सिजनमा शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् । आइतबार अमेरिकी च्यानल एबिसीबाट प्रशारण भएको पहिलो शृङ्खलाबाट उनी छानिएका हुन् ।
उनी शीर्ष २० भित्र परेका छन् । २० वर्षीय पोखरेल ६ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । काठमाडौंमा जन्मेका दिवेशले कर्णाली, प्रलय बीजस्ता गीत बजारमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिकी आइडलका निर्णायक लुक ब्रायनले अडिसनमा दिवेशलाई ठूलो स्टार हुन सक्ने भन्दै चर्चासमेत गरेका छन् ।
१८ औं शृङखलाको निर्णायकमा ब्रायनसँगै केटी परी र लाइनल रिची रहेका छन् । उनलाई सफलताको शुभकामना । हेरौ भिडिओ :
He really is "di-besh."
Posted by American Idol on Sunday, February 16, 2020
नयाँ वर्षको तीजमा ‘स म्हालिन्छ कहिले मन’
काठमाडौं । फिल्म ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ प्रदर्शन मिति तय भएको छ । निर्माण युनिटले ५ भदौलाई फिल्मको प्रदर्शन मितिका रुपमा सार्वजनिक गरेका हो । सुदर्शन थापाको निर्देशन रहेको फिल्म हिन्दु नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । अमित बस्नेतको लगानी रहेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता अंकित गौतम र सनिष खकुरेल हुन् […]
चर्चित बलिउड नायिका करिना कपुरले आज बिहान जन्माईन दोस्रो बच्चा
Posted on February 21, 2021 Author khabar silo
नायिका करिना कपुरले आज बिहान आफ्नो दोस्रो बच्चा लाई जन्म दिएकी छिन । दोस्रो सन्तानका रुपमा पनि छोरालाई नै जन्म दिएकी हुन् । आज बिहान १०: ५४ बजे दोस्रो सन्तान जन्माएकी हुन् । ठूला छोरा तैमुर ४ वर्षको पुग्दा करिना र सैफअली खानले दोस्रो सन्तानका रुपमा पनि छोरालाई नै स्वागत गरेका छन् । तेस्तै ,बलिउड […]
दुर्गेश थापाको ‘ह्याप्पी तिहार’ बोलको गीत सम्पादन गरेर युटुबमा अपलोड गरिएको छ । पछिल्लो समय विवादित र आचोचना भएको तीहार गीत मंगलबार युटुबबाट हटाइएको थियो । जसमा गीतको बोल ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ शब्द हटाइएको छ भने गाँजा शब्दमा बिप हालिएको छ । थापाले सो गीतको भिडियो आफ्नै च्यानलबाट अपलोड गरेका हुन् । गीत सम्पादन […]
मुनाको ह’त्या गर्नुअघि सीसीटीभीतिर फर्केर किन टोलाएका थिए विजय?
लाटोकोसेरोसँग टिकटक बनाउँदा, बन विभागले लगायो २५ हजार जरिवाना [ भिडियो सहित ]